Peixin wuxuu ka soo qeyb galay ANDTEX 2019 magaalada Bangkok, Thailand | PEIXIN
ANDTEX 2019 waa dhacdada meesha kuwa soosaarayaasha iyo soosaarayaasha alaabada injineerinka, baarayaasha, adeegsadayaasha, iyo hogaamiyaasha wershadaha ee adduunka oo idil ay iskugu keenaan inay sahamiyaan hodanka fursadaha ganacsi ee cusub ee loogu talo galay dadka aan duuliyaha laheyn iyo waxyaabaha nadaafadda lagu tuuri karo ee Koonfur Bari Aasiya.
Koonfur-bari Aasiya waxay ka kooban tahay 11 dal oo ay ku jiraan Thailand, Indonesia iyo Malaysia, oo ay ku jiraan dad isku-dhafan oo ah 640 milyan oo qof. In ka badan 10 milyan oo dhallaanka cusub ah ayaa dhasha sanad walba, tirada haweenka ayaa ah 300 milyan, dadka gabowga ah / dadka da'da ahna waa 40 milyan.
Awoodda wax-soo-saarka ee nonwovens-ka hadda kuma filna inay qanciso baahida macaamiisha ee gobolka, gaar ahaan wax-soo-saarka aan kala go 'lahayn, ee aan laga soo saarin Thailand ama Koonfurta-bari Aasiya.
Intii lagu jiray carwada, sababtoo ah tikniyooladeena horumarsan, tayo sare leh iyo adeegga iibka ka dib marka loo fiirsho, Qalabka PEIXIN wuxuu soo jiitay macaamiil fara badan oo ku sugan suuqa oo dhan. Kadib markii aan soo bandhignay shaqooyinka mashiinkeena, falanqeeyaha waxsoosaarka iyo geedi socodka farsamada, macaamiil badan ayaa amaaney mashiinada, gaar ahaan mashiinka xafaayadda ilmaha iyo mashiinka hoostiisa. Waxaan isku daynay intii karaankeena ah inaan uga jawaabno dhammaan su'aalaha si cad oo taxaddar leh. Dhamaan macaamiishii way ku qanacsanaayeen adeeggeenna.
Waxaan maalgelin badan ku bixineynaa cilmi baarista iyo horumarka oo aan hirgalinaa nidaamyada maaraynta horumarsan maxaa yeelay waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan hal talaabo hore u sii soconno. Waxaanan rajaynaynaa inaanu mustaqbal ifaya leh la wadaagno macaamiisheena oo dhan.
Panty Liner , Pull Up Machine , Lady Pad Machine , Mashiinka Nadaafadda Maalinlaha ah , Mashiinka Wetes Wipes , Khadka Wax Soosaarka Mini Pad ,